Global Voices teny Malagasy » Shina: Ny fiantraikan’ny fihetsiketseham-panafahana an’i Tibet · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Avrily 2008 1:00 GMT 1	 · Mpanoratra John Kennedy Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Politika
Noankotrihina ny 15 Avrily:
Nivoaka ny tahalam-pifandraisana (aterineto) ny fanorisorenana an'i Wang Qianyuan, ary raha ny marina dia efa nialoha herinandro vitsivitsy talohan'ity lahatsoratra ity. Efa nanoratra mivantana ihany koa ny naman'i wang ao amin'ny Oniversiten'i Duke:
Naman'ny tovovavy aho ary tany amin'ny fihetsiketsehana. Mahalasa adala ny (ompa variraraka: ataoko fa io no tian'ny mpanoratra lazaina na dia mody noshinoavana ho fenqing aza ny teny). Nihaona tamin'ny filohan'ny Duke aho androany tolakandro, ary tahaka ny hoe hiditra an-tsehatra ny FBI. Voatora-bato ny tranon'ny ray aman-dreniny any Qingdao, ary any ampiafenana izy ireo (voamariko izany satria nifandray mivantana tamin'ny reniny aho). Tao amin'ny tranonkalan'ny fikambanan'ny mpianatra sy manampahaizana shinoa eto Duke no nanombohan'ity raharaha ity. Ny nosoratan'izy ireo voalohany iray volana lasa izay dia ny hafatra manao hoe ” HATRAMIN'IZAY, ANKEHITRINY ARY HO MANDRAKIZAY DIA ANISAN'I SHINA HATRANY I TIBET”.
Ary satria moa voapetraka ao amin'ny lisitry ny Duke, ny mombamomba azy, ny fianakaviany, ny adiresiny ary ny azo iantsoana azy no sady voasoratra ao ihany koa ny fiantsoana hisetrasetra, dia efa azo heverina ho efa heloka bevava famporisihana hanao herisetra izany. Mampalahelo! Ny tena mampahonena indrindra dia nandeha ampahatsorana loatra ramatoakely ka tafaharo tamin'ny “vondron'ny fahavalo” hiresaka amin'ny mpiray kilasimandry taminy izay Tibetana, ary saiky hanokatra karazana fifanakalozan-kevitra…
Ny lahatsoratra tamin'ny voalohany:
Raha tratran'ny fahafaham-baraka nisesy i Shina nandritra ny fampitana ny afo olaimpika tamin'ny herinandro lasa teo dia nampiredareda, tsy te-hahalala izay heverina ho mivandravandra any Eoropa sy Amerika avaratra, ny afom-pitiavan-tanindrazana izany, hany ka sokajiana ho vondron'ny mpamadika izay rehetra te-hampiditra adihevitra mikasika an'i Tibet, eny fa na dia mpanao gazety malaza aza izy. Koa raha nahomby ary iny fihetsiketsehana hanafahana an'i Tibet iny, moa ve izany mahasolo ny fampanginana ny feo maningana any Shina raha atao hoe samy nisy nahavoazana ny andaniny sy ny ankilany?
Malaky dia malaky tokoa, noho ny fanampian'ny ‘wu mao dang'(vondrona polisin'aterineto any Amin'ny taniben'i Shina) ny voka-pikarohan'ny milina mitady nofon'olombelona; Vehivavy shinoa iray izay mianatra any amin'ny Oniversiten'i Duke amin'izao fotoana izao no hitan'ny mpianatra Shinoa ampitan-dranomasina ho nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panafahana an'i Shina. Izay azo heverina ho fiezahan-dratovovavy hampiditra karazana adihevitra no nivadika ho ranomodin'ny fihoaram-pefy maharikoriko sy farafahakeliny lasa fihazana mpamosavy avy amin'ny milina mpitady nofon'olombelona, nanomboka ny 10 avrily lasa teo tao amin'ny tranokalan-dinika malaza Tianya ( ny fihazana):
在SF的奥运火炬接力顺利完成的同时,全美各地华人华侨留学生也都给予了北京奥运最热烈的支持,然而在今天的DUKE大学留学生的支持奥运反对藏独的集会 游行中,青岛2中毕业的王同学竟然与藏独支持分子同流合污,毅然抛弃事实,站在藏独分子的一边,宣扬西藏人权问题,赤裸裸打着free tibet的旗号,实在给中国人民丢脸,在场的几百留学生都目睹了其罪恶行径.王千源–如果说某些美国人算作无知,那你呢?你这样的崇洋媚外的嘴脸是要永 远被中国人民所不耻!
Nandritra ny fanatontosana tamim-pomba milamina ny fampitana ny afo olaimpika tao San Francisco, no nihetsiketsehan'izay rehetra manam-pirazanana Shinoa sy ny mpianatra Shinoa ampitan-dranomasina tany amin'ny toerana samihafa manerana an'i Amerika ilazany ny fanohanana amin'ny heriny manontolo ny lalao olaimpika hotanterahina any Beinjing. Nanao ny anjarany nivory hanohana ny lalao olaimpika sy hanohitra ny fahaleovantena Tibetana ihany koa ny mpianatra ampitan-dranomasina ao amin'ny Oniversiten'i Duke, Nijabaka tany amin'ny mpanohana ny fahaleovantenan'i Tibet kosa ny mpiara-mianatra wang izay nivoaka avy tamin'ny sekoly ambarataonga faharoan'ny Qingdao,nandao tanteraka ny marina, niara-nilahatra tamin'ny mpanafaka an'i Tibet, nitsoka ny anjomaranan'ny mpiaro ny zon'olombelona Tibetana, miantsoantso amin-kafanam-po ny ‘Afaho i Tibet’, manao izay mahasanganehana ny vahoaka Shinoa, sady amin'izay hitako sy hitan'ireo mpianatra ampitan-dranomasina anjatony mivantana ny fahotana ratsy vitany. O ry Wang Qianyuan a: raha mihetsiketsika noho ny tsy fahalalàna ireo Amerikana ireo, fa izato ianao kosa mba manao ahoana? ny endrikao vahiny mampandokandoka lahy ka nataonao ho hitoetra mandrakariva ho fanalam-baraka ny vahoaka Shinoa!
Nanaraka io teny fampidirana io dia nahatratra 11 takelaka ny fanehoan-kevitra:
Na dia tsy hitako aza ny sary,dia mampandoa ahy ny mandre olona tahaka ity!
Tokony aely izany.Mety ho fanin'ny fifangaroana mihitsy izy e. Tsy fantatro na efa nifindra monina ihany koa ny ray aman-dreniny sy ny havany, fa moa ve mba tsapany hoe olona firifiry ny mitondra ny mangirifiry noho ny nataony?
Asehoy anay ny sary eeee!
Tsy hitako izay tokony holazaina, aleo tsy raharahiana fotsiny izao. fa aza avela hanakaiky ahy latsaka ny dimy metatra izany alikavavy izany.
Inona no iadiam-barotra?
Fa mivaha ve ny mpanoratra an'io e?
Asehoy ary ny porofo–Handranitra ny antsiko aho izao
Nahoana no kely monja izany….aza adinoina ny mametraka anarana hafa any amin'ny lisitra maintin'ny ambasady Shinoa
Avelao ho faty any fa boay tsy mahalala menatra.
O ry lanitra o..
Sekoly ambaratonga faharoan'i Qingdao
tena mahamenatra be izany
Tifiro ho faty any amin'izay misy azy any izany
Izy ve io?
Asehoy tsara ny sary e~
efa ela aho no te ho jiolahimboton'ny net~
Ataoko ho mahafinaritra sy hendry izy e~
Marina ve? Tokony aseho mihitsy io.
Tsy mampino… raha izay no lazainao dia asehoy ary ny porofo.
fa mankaiza no tianao aleha e?!
Ilazao ny Minisitry ny filaminana, ny masoivoho Shinoa, ny mpitondra any amin'ny toerana misy azy
Miangavy indrindra tompoko ô! aza entinareo aty ny valifatinareo e, tsy jamba akory ny mpiserasera!
Tsy hahazo vady intsony izy e!!!
Tsy misy lalana!! Tena avy any Qingdao ve izy? lavitra ny lalana e, hehe, ry milina mpitady nofon'olombelona!! Hehe!! Mahery e! Mahery!! Angaha fantatry ny ray aman-dreniny fa te-ho very ny zanany aty ampita aty sady tsy misy mikarakara izy aty!
Afaka manambady Lama (olona nanoka-tena tsy hanambady) izy ka~
Toa hoe ny alika ihany hoe no tia Lama, manantena aho fa tsy anisany izy.
Miantsoa nofon'olombelona ry milina mpikaroka!!
Angamba tratran'ny devoly vahiny be dia be tany izy? Avy aiza izany fakofakon'olona izany e?
Tsy maintsy misy foana ny olona tsy mazava saina
Porofo no tena zavadehibe e!Tsy manao ny tsy rariny amin'ny olona tsara isika, fa raha ratsy izy dia tsy avelavelatsika foana amin'izao izany!
Azo itokiana ve ity vaovao ity? Toa mpankato ny fijery azy…
Fantaro ny fomba Shinoa, Fa raha hita izy, dia tokony hotratrarina, ary raha manana fianakaviana izy, dia hotadiavina, dia kapohina eo imasony ny ho faty ny zaza mahamenatra, amin'izay dia tsy afa-baraka ny vahoaka shinoa.
Mampalahelo ahy ny ray aman-dreniny, ny zaza saiky ireharehana no lasa mpamadika – asa raha mba noeritreretin-drasipa ny henatra sy fahafaham-baraka iainan'ny RAD noho ny nataony
Milaza izany ianareo nefa tsy misy porofo akory! farafaharatsiny mba mametraha sary e, mazava? Mitonia daholo, aza dia mitroatroatra loatra, tsy misy azo ianteherana avokoa ireo, tsy mety ny mitabataba sy mikoraraika tahaka izao. Tsy fantatrareo akory raha misy mikendry ny handentika azy fotsiny any ho any, manendrikendrika azy, mba ahazoan'ny mpiserasera manompa azy sy hifatraran'ny fahatezerana any aminy!!!
Tahaka ny marina ihany an!
Misy mpianatra ampitandranomasina nametraka ny sariny ao amin'ny MIT bbs
Raha manana proxy ianao dia afa-mijery azy
Raha marina izany dia hoteteziko avokoa ny varavaran'ny havany rehetra dia soratako eo ny soratra hoe “mpamadika”, amin'izay dia antsoina hoe vondron'ny mpamadika fianakaviany iray manontolo
Mba misy rahalahy na anabavy manana proxy ve afa-mametraka ireo sary ireo eeee?
Ny lohany fotsiny io sady tsy nanao na inona na inona izy, tsy rariny kosa … tsy manaporofo mihitsy izao fa mpamadika izy … tsy misy sariny mitondra taratasy zaraina ireny ve na nitondra saina?
tsy efa azonao eritreretina ve fa efa niantoraka hiasa ho an'ny fahavalo izy???
Avelao aho hanompa azy e
Tsy azo ekena mihitsy!
Na ho ela na ho haingana dia hahazo ny anjarany tsirairay ny fianakaviany iray manontolo!
Makorelina mpamadika, manala baraka ny volonkoditray!
Mbola any Shina ve ny ray aman-dreniny? Sa mbola Shinoa ve ny ray aman-dreniny? fa raha mbola Shinoa dia hitady lavan-jezika lalina aho rahampitso hamonoako tena.
Tena miangavy ny rehetra mihitsy aho mba hangina izao!!!!
Tokony ho hitantsika rehetra ny zavamisy vao mitsikera. Raha toa moa izy ka tsy mpamadika, nefa antsointsointsika amin'izay anarana mahamenatra indrindra tsy amin'antony izy, moa tsy izany no tena tsy rariny mety hitranga. Lazao fa tena mahamenatra tokoa izy, fa mahazo manompa azy avokoa ny rehetra, avelao izy hahazo ny kara-maitso (green card ilay fahazoana ny zom-pirenena amerikana araka ny fahazoako azy) izay katsahitsika rehetra, tsy ho afa-mitoetra hanome voninahitra ny anarana shinoa intsony izy, ary tsy mba manam-pahafahana ny olona tahaka azy isika hanakana azy tsy hizaka ny zom-pirenena amerikana haingana kokoa.
Raha marina izany, dia tsy misy zavatra hafa ambara intsony, esory fotsiny ny zony.
Ry mpiara-mianatra mahafinaritra Wang, Indrisy fa aty amin'ny Tanibe aho ka amim-panahy ihany no ahafako manohana anao.
Fa raharahan'inona koa no iraisanareo tsikombakomba mahatonga anao hanohana azy?
Hita tao amin'ny MIT bbs tokoa ny tariby (ny tantara?)!!
Io tokoa ny anarany!
Hafa indray io mpanoratra io
Misy ary ve ny porofo?
Efa nilazana ve ny minisitry ny filaminana o??? Efa ampy ve ny porofo????
Nitohy hatrany ny fanorisorenana, ny fanompana ary ny fandrahonana ho faty izay ahitana tsindraindray eny ihany ny fitadiavana ny porofon'ny “heloka” vitany, hatramin'ny nanombohany teo amin'ny faran'ny pejy faharoa:
Narahin'ny soratr'olona iray nilaza fa tao nandritra ny fihetsiketsehana tao amin'ny Oniversiten'i Duke nandritra io andro io:
Nanatrika tao aho. Nivory teo amin'ny ilany andrefan'ny Anjerimanotolon'ny Duke ny mpianatra Shinoa hanao fihetsiketsehana, tokony ho 400 teo ho eo ny fitambaran'izy ireo. Ny mpanafaka an'i Tibet kosa namakivaky ny Anjerimanontolo avy any amin'ny ilany atsinanana ho any amin'ny ilany andrefana, nambenana polisy nandritra ny andro. Nisy mpianatra na manampahaizana shinoa tokony ho 12 teo ho eo niakanjo tee-shirt “My Chinese Heart” (ny fo mahashinoa ahy) sy “Beijing Olympics” (lalao olaimpikan'i Beinjing), nitondra sainam-pirenena lehibe, nihazakazaka roa metatra nialoha ny mpanafaka an'i Tibet. Raha vao tonga tany amin'ny ilany andrefan'ny anjerimanontolo ry zareo dia nanao fihodinana lehibe indray mandeha, nihazakazaka ry zareo mandra-pahatonga teo antokonan'ny efitrano fanaovam-petin'ny Duke. Nandritra izany fotoana fohy izany, dia nohodidininay tamin'ny saina mena ry zareo, ary nanontanianay raha efa tany Tibet, na mba efa tany Shina. Nangina ny maro tamin'ireo mpanafaka an'i Tibet. Boay Amerikana kely izay no niteny fa efa tany nandritra ny efa-bolana… satria moa ry zareo no namandrika voalohany ny toerana manatrika ny efitrano lehibe fanaovam-pety nanomboka tamin'ny 7 tamin'io alina io mandrapahatonga ny tamin'ny sivy sy sasany, avy eo ry zareo niakatra ny tohatry ny efitrano fanaovam-pety, nijoro roa metatra nanatrika ny tohatra kosa ny mpianatra sy ny manamapahaizana shinoa, nitazona ny sainam-pirenena sady nihira ny hiram-pirenena mafy tokoa izahay. Izay ankoatra ny saina rehetra dia mpanafaka an'i Tibet avokoa. Naka sary avy ao aoriany avokoa ny mpanao gazetin'ny Anjerimanontolo, sary mamandrika, saingy nameno ny gazetin'ny Anjerimanontolo androany.Kely loatra ny sary amin'ny tranonkalam-pifandraisana ity: http://media.collegepublisher.com/media/paper884/stills/rv87o3×3.jpg
Nijoro teo afovoany tsara kosa ity sipakely, nahatonga ity lahatsoratra ity, ary nitohy naka sary tao ivohony ny mpanafaka an'i Tibet, tahaka ny amin'ity sary ity:
Ity sipa ity, mba hisintonana ny fijery fotsiny ihany, dia nivonona ny hamadika ny tanindrazany.
Tsy afa-mampiseho ny sary aho, misy afaka manampy ahy ve? Avoahy ny sary, asehoy ny porofo. Nantaonay ve izany nampangina ny shinoa?
Taoriana kelin'io filazana io dia nisy nametraka ny rohin'ny lahatsary avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana andaniny sy ankilany:
Nijery ity lahatsary ity ny rehetra:Nivoaka tamin'ny dimy sy fahefany i Wang Qianyuan, ary hita mazava fa nijoro nanatrika ny ankamaroan'ny mpianatra shinoa izy. Ity misy tsipalotra mazava tsara tamin'ny 7:05 dia nisy mpiara-mianatra taminy nanodidina azy, nanontany azy ny antony hiantsoany ny fanaleovantenan'i Tibet, fa tsy mba niara-dia tamin'ny saina menan'ny kintana dimy. Tamin'ny 7:27 dia namaly izy fa manana saina ihany koa anie i Hong Kong.
Nipetraka tao amin'ny pejy faharoa io lahatsary io tamin'ny voalohany; nanomboka tao amin'ny takelaka fahateo kosa ny fitsatotsatohan'ny marony laharam-pinday amerikanan'i wang, ary nanomboka teo no niditra an-tsehatra ny mpianatra shinoa ahafa avy ao amin'ny Oniversiten'i Duke, nanomboka teo dia nisy adihevitra fohy, taorian'ny pejy fahatelo amin'izay no nanomboka naherivaika ny fitenenana ary tsy nitsahatra izany mandrapifaran'ny adihevitra, izay mbola mitohy hatrany mandrak'izao fotoana anoratana izao.
Niseho tao amin'ny pejy fahaenina kosa ny laharan-karapanondron'i Wang sy ny adiresin'ny ray aman-dreniny miaraka amin'ny laharan'ny fiantsoana azy any Shina, ary teo akaikikaiky teo no nivelatra amin'izay ny rohin'ny adihevitra tao amin'ny Tianya.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/04/16/833/